Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: kely vidian-dafo | NewsMada
Libération de l’élu de Fandriana : le Pac réticent
Voka-pifidianana, olana sosialy, grevy: miatrana manoloana ireo hetsika mety hiseho ny Emmo/Reg
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: kely vidian-dafo
Par Les Nouvelles sur 08/08/2019
Mifalia ry namana ao anatin’ny tontolon’ny fanapariahana vaovao ! Tsy nandiso fanantenana i Lalatiana Rakotondrazafy, mpiray petsapetsa tao anatin’ity sehatra ity, tsy ela akory izay dia lasa minisitry ny serasera amin’izao fotoana izao. Tsy namadika ny tolona nandraisany anjara mavitrika ho an’ny fiarovana sy fitakiana fahalalahana tsy tandondomin’ny rahona toy ny fanagadrana ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asa fampitana vaovao. Mazava izany ao anatin’ilay lahatra kasainy hatolotra ho an’ny fandanian’ny filankevitry ny minisitra, ilay izy, ho volavolan-dalàna izay avy eo hapetraka ho dinihin’ny parlemanta ahafahan’ireo antenimiera roa tonta tompom-pahefana momba ny fanaovan-dalàna, manapaka ny hevitra farany ahatongavan’ilay volavola ho lalàna manan-kery.
Sady afa-po no mikainkona ihany ny ankamaroan’ny olona ao anatin’ny tontolon’ny fitaterana vaovao. Mazava ny fiarovana ny tsy fampidirana an-tranomaizina noho ny heloka eo amin’ny fampitana vaovao, saingy somary midangana avo dia avo no kasaina hapetraka ho sandan’izay fahafahana izay. Hadinon’ireo namolavola ilay tolotra kasaina ho volavolan-dalàna, angamba, ny fahalafosan’ny vidim-piainana ho an’ny madinika. Ao anatin’ny sokajin’ny madinika ny mpanao gazety na misy aza ny mbola mafiady noho izy. Raha izay tarehin-javatra izay no hiaingan’ny dinika, dia tsy taka-bidin’ny maro amin’ny mpanao gazety ilay fahafahana aderaderan’ity volavolan-dalàna ity, ka lasa ho sady firavaka tsy iambozonana fa famalifalin-tsaina fotsiny, no biby fampitahorana izay manery fifehezan-tena samy irery sao mikitika biby tsy hay zakaina ny fifoterany. Toa toy ny vato fisaka atoraka hitety rano, ka milentika ihany ny fiafarany. Ny heloka eo amin’ny asa fampitana vaovao tsy azo saziana amin’ny fanagadrana fa amin’ny didy fampandoavana lamandy, ny tsy fahafahana handoa lamandy sao dia heloka saziana amina didy fampidirana am-ponja, miala Ankatso ka Ambohidempona.
Andanin’izany rehetra izany anefa, misy eo amin’ny tontolo manodidina, hasina sarobidy izay tsy azo hodian-tsy jerena ka sahy itsakitsahana. Noho ny fanajana ny fahalalahana ve dia omena sehatra ahafahany manampatra toy ny banga manararaotra maizina ny mpanao gazety ? Na ny hasin’ny fiaramonina na ny haja sy zon’ny olona tsirairay dia samy mendrika arovana avokoa. Anjaran’ny tompom-pahefana tokoa moa ny fandalanjalanjana ny fomba ahafahana mandravona sy mitandro ny fomba fanajana izany hasina maro karazana izany. Ny rariny eo amin’ny fahaizany manoritra ara-drariny ny faritra tsy ifanitsahan’ny hasina sy zo ary haja maro samihafa no ahafahana mitsara ny asany.
Lemursportal: antontan-kevitra rehetra ho an’ny mpianatra 07/12/2019
Airtel sy Baobab+: herinaratra ho an’ny tokantrano iray tapitrisa 07/12/2019
Handisport – Basikety: nanao pao-droa nanoloana ny Kaomoro ny malagasy 07/12/2019
“Mipay Talenta Vao”: hitiliana ireo mpanolotra fandaharana vaovao 07/12/2019
« ‘Ndao handihy »: hovelarina kokoa ny vakodrazana 07/12/2019
Jery taratra… herinandro: mila fitoniana am-piandrasana…